Reinfeldt oo ka dhawaajiyey in aysan Iswiidhen heegan-gelin ciidamadeeda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Reinfeldt oo ka dhawaajiyey in aysan Iswiidhen heegan-gelin ciidamadeeda
La daabacay måndag 3 mars 2014 kl 09.39
Raysalwasaaraha Iswiidhen Fredrik Reinfeldt ayaa shalay u sheegay idaacadda Ekot in Iswiidhen aysan weli diyaar u ahayn in ay heegangeliso ciidamadeeda xoogga dalka dhaqdhaqaaqa militeriga Ruushka awgiis, taas oo dhaleeceyn kulul uga timid Wilhem Agrell oo ah caalin daraasada sirdoonka.
– Hadalkaas waxaa ka muuqda argagax iyo cabsi iyo in aanaan waxba samayn karin. In aannaan xoojin karin habka aan ku diyaargaroobeynno iyo ammaankeennu waxay u muuqataa dhibaato weyn o ona soo foodsaartay. Waana hab khatar ah in uu waddan yari sidaas u fekero, ayuu yiri Wilhem Agrell, oo ah caalin cilmiga sirddonka.
In uusan ciidanka xoogga dalka Iswiidhen diyaargarow gelin ama uusan wax ka beddelin hawlahiisa dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ruushka awgood, wuxuu Reinfeldt ka yiri isagoo la hadlaya idaacadda Ekot:
– Dersiga aan taariikhda ka helnay ayaa ah in aan colaad lagu xallin karin colaad kale. Waa in arrinta la qaboojiyaa.
Balse hadalkaas waxaa dhaleeceyn u soo jeediyey caalinka Wilhelm Agrell:
– Hadalka raysalwasaaruhu waa mid la yaab leh marka laga eego in Iswiidhen ay khaanad geliso diyaargarowga ciidamadeeda si dalka loo difaaco iyo in khaanad kale la geliyo gardarrada uu Ruushku ku hayo dalka Ukraina oo aan la isku xiran.